သားဖြစ်သူ လေးဘာသာဂုဏ်ထူးပါလို့ အပျော်လွန်ပြီးဂျွမ်းထိုးပြတဲ့ မိခင် - Cele Platform
မန်မာနိုင်ငံရဲ့ စိတ်အဝင်စားဆုံးဖြစ်တဲ့ ၁၀တန်းအောင်စရင်းကတော့ ဒီနေ့မနက်မှာဘဲ ထွက်ရှိသွားခဲ့ပါပီး။၁၀တန်းစာမေးပွဲအောင်လို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့မိဘများရှိသလို့. ၁၀တန်းကျလို့ ကိုယ်သားသမီးကို အားပေးနေတဲ့မိဘများလဲရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ fbပေါ်တက်လာတဲ့သတင်းတစ်ပုံကတော့ သူသားလေး လေးဘာသာဂုဏ်ထူးပါလို့ အပျော်လွန်းပြီး ဂျွမ်းထိုးပြပီးအပျော်လွန်းနေတဲ့ မိခင်ကတော့ ကြည့်မိသူတိုင်းအပျော်များကို ကူးစက်စေပါတယ်။ပရိတ်သတ်ကြီး ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ပြီး အပျော်များကူးစက်နိုင်ကြပါစေ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ စိတျအဝငျစားဆုံးဖွဈတဲ့ ၁၀တနျးအောငျစရငျးကတော့ ဒီနမေ့နကျမှာဘဲ ထှကျရှိသှားခဲ့ပါပီး။၁၀တနျးစာမေးပှဲအောငျလို့ ပြျောရှငျနတေဲ့မိဘမြားရှိသလို့. ၁၀တနျးကလြို့ ကိုယျသားသမီးကို အားပေးနတေဲ့မိဘမြားလဲရှိပါတယျ။
ဒီနေ့ fbပျေါတကျလာတဲ့သတငျးတဈပုံကတော့ သူသားလေး လေးဘာသာဂုဏျထူးပါလို့ အပြျောလှနျးပွီး ဂြှမျးထိုးပွပီးအပြျောလှနျးနတေဲ့ မိခငျကတော့ ကွညျ့မိသူတိုငျးအပြျောမြားကို ကူးစကျစပေါတယျ။ပရိတျသတျကွီး ဗီဒီယိုဖိုငျကို ကွညျ့ပွီး အပြျောမြားကူးစကျနိုငျကွပါစေ။